IIMAANA Archives - Page 3 of 15 - Ibsaa Jireenyaa
Sababootaa fi Furmaata Waliin Oduu Warra Fooyya’iinsa booda duubatti deebi’anii-Kutaa-1
December 9, 2020 Sammubani Leave a comment
Sababoota mata-dureen kuni akka filatamu taasisan
Mata duree kamiyyu irratti barreessun dura namni tokko hamma bu’aa barreefama isaatii fi haajaa ummanni wanta qalamni isaa barreesseef qabu beeku qaba. Mata-duree kana barreessuu fi filachuun sababoota baay’ee qaba. Isaan keessaa muraasni:
December 4, 2020 Sammubani Leave a comment
Seenan haa lakkaa’u namoota erga fooyya’anii fi kaabbaa iimaanaa diratanii booda ofirraa mulquun iddoo badaa duraanitti ykn san caalutti deebi’an meeqa ta’uu? Namoota akkanaatiin muntakisiina jennaan. Dhugumatti, erga qajeelanii booda jallachuun, erga kabajamanii booda salphachuun, erga milkaa’uf hammi xiqqoon nama hafu kufaatiitti kufuun hangam nama rifachiisaa, hangam nama gaddisiisaa! Salafoonni dhuma (khaatimaa) badaa sodaachuun khaatima gaarii irratti du’uuf wanta danda’an hunda godhu. Dhugumatti, xumurri hundu sababa qaba. Kanaafu, sababoonni fooyya’iinsa booda duubatti akka deebi’anii fi khaatima badaa irratti akka du’an nama taasisan baay’eetu jiru. Kitaaba “Min Akhbaaril muntakisiina” jedhu keessatti furmaataa fi seenaa waliin sababoota kanniin ni dhiyeessa. Sammubani.com’s hanga danda’uun gara Afaan Oromootti deebisuun isiniif dhiyeessa. La hawla walaa quwwata illah billah.